पुँजीबजारमा युवाको प्रवेश र बजार विस्तार «
पुँजीबजारमा युवाको प्रवेश र बजार विस्तार
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १६, २०७७ आईतबार
पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा युवाहरूको प्रवेश बढेको देखिन्छ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकको आईपीओ खरिदमा सी आस्बामार्फत आवेदन दिने विभिन्न बैंकहरूमा युवा विद्यार्थीहरूको पनि भीड नै देखिएको छ । कतिपय विद्यार्थीहरूको भनाइमा यो बैंकको सेयर सबै आवेदकले पाउने भनेकाले पहिलोपल्ट आवेदन दिन आएको भनाइ रहेको पाइयो । त्यसो त कतिपय युवाहरूको भनाइमा सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने प्राथमिक बजारबाट गर्न लागेको पनि देखियो ।
अहिले आईपीओमा आवेदन दिन रु. १ हजार मात्र भए पनि पुग्ने भएकाले विद्यार्थीहरूका लागि सजिलो भएको बताउँछन् नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू । अहिले आईपीओ सेयर खरिद गर्नका लागि रु. १ हजार मात्र भए पनि पुग्छ, १० कित्ते नियमले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारको पहुँचसम्म पु-याएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । तर पनि केही लगानीकर्ताहरू भने यो १० कित्ते नियम उपयुक्त नभएको बताइरहेका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा जारी भएको गरेको महिला लघुवित्तको आईपीओमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । महिला लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या १५ लाख ८० हजारभन्दा बढी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजारप्रति आमनागरिकको चासो बढेको देखिन्छ । सेयर बजारमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा सडकदेखि सदनसम्म सेयर बजारको चर्चा हुन थालेको छ । चिया गफमा पनि सेयर बजारको नै चर्चा हुन थालेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । पछिल्लो समयमा सेयर बजारप्रति सबै वर्ग, समुदाय, पेसाकर्मीहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेका देखिन्छन् । सायद यही कारणले होला, विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सबै पेसाकर्मीहरू सेयर बजारमा लागे देशको काम कसले गर्छ भनेर पनि भनेका थिए । यसरी युवावर्गदेखि गृहिणीहरूको सम्म सेयर बजारमा चासो बढेको देखिन्छ । सेयर बजारप्रति आमलगानीकर्ताहरूको चासो र आकर्षण बढेकोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसले सेयर बजारको दायरालाई फराकिलो बनाउँछ र बनाइरहेको छ ।
त्यसो त पछिल्लो समयमा नवप्रवेशीहरू र युवावर्गको आकर्षण प्राथमिक बजारमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू भइसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । डीम्याट खाता खोल्नेहरू नै २५ लाखभन्दा बढी भइसकेको भनिन्छ । बन्दाबन्दीको समयपछि प्राथमिक बजारमा मात्र नभई दोस्रो बजारमा पनि युवावर्गहरूको प्रवेश बढेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा सेयर कारोबार गर्न झन्झटमुक्त हुँदै गइरहेकाले पनि सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भएको हो । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा कारोबार गर्ने प्रक्रिया डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ ।
अहिले सेयरको कारोबार अनलाइनबाट पनि मेरो सेयरमार्फत इन्टरनेटको सुविधा भएको जहाँतहीं देश बिदेशबाट घर, पसल कार्यालय जुनसुकै स्थानमा बसेर गर्न सकिने भएकाले पनि सेयर बजारप्रति आमनागरिकहरू सबैको आकर्षण र चासो बढेको हो ।
सेयर बजारको दोस्रो बजारमा भन्दा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू बढेका छन् । प्राथमिक बजारमा कम लगानी तथ कम जोखिममा पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानी गर्न रु. १ हजारदेखि लगानी गर्न सक्ने भएकाले प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू ह्वात्तै बढेको जस्तो देखिन्छ भने दोस्रो बजारप्रति पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको पनि देखिन्छ । प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरूको गन्तव्य भनेको पनि दोस्रो बजार नै हो । पछिल्लो समयमा एकै दिन ५० हजार लगानीकर्ताहरूले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नै भइसकेका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तै, ८० प्रतिशत लगानीकर्ताहरूले अनलाइनबाट कारोबार गर्ने गरेका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यसैले त पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा एकपछि अर्को गर्दै रेकर्डहरू कायम गरिरहेका छन् ।
दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने भनेको प्राथमिक बजारमा जस्तै होइन । प्राथमिक बजारमा लगानी तथा जोखिम दुबै कम हुन्छ भने दोस्रो बजारमा लगानी तथा जोखिम दुबै अलि बढी रहेको हुन्छ । त्यसो त एउटा भनाइ छ नि— नो रिक्स नो गेन । पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू ह्वात्तै बढेका कारणले सेयर बजारमा विभिन्न चर्चाहरू पनि चल्ने गरेका छन् । सेयर बजार डिजिटललाइजेसनमा भएको भए पनि विगतमा जस्तो बोरा प्रवृत्ति अहिले पनि नहटेको गुनासो पनि छ । अहिले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको नागरिकता जम्मा गरेर एकै व्यक्तिले धेरै व्यक्तिहरूको आवेदन दिने गरेका कारण पनि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू ह्वात्तै बढेको कतिपयको भनाइ छ ।
त्यसो त सेयर बजारमा प्रवेश गर्नेहरू सेयर बजारसम्बन्धी जानकार नै रहेका हुनाले यस्ता विकृती कमै होला । पछिल्लो समयमा भर्खर जन्मेको बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूको बैंक खाता र डीम्याट खाता खोल्न आउनेहरूको भीड नै हुने गरेको बैकका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सेयर बजारमा कारोबार गर्न र आईपीओ खरिदमा आवेदन दिन नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएका कारण नाबालकहरूले पनि अभिभावकको नागरिकताबाट आईपीओ सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति कतिपय लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सेयर बजार भनेको प्राथमिक बजार मात्र होइन, सेयर बजारको वास्तविक बजार त दोस्रो बजार हो । तर पनि कतिपय लगानीकर्ताहरू प्राथमिक बजारमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । तर प्राथमिक बजारमा होस् वा दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने युवा वा वयस्क सबै लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने देखिन्छ भने लगानीकर्ताहरू सचेत र सजग हुनुपर्छ । नत्र हल्लाको भरमा बजारमा लगानी गर्दा जोखिम बढि हुन्छ ।
नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक
चलचित्र क्षेत्रका लागि निराशाजनक वर्ष
२०७८ साल नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि निराशाजनक रह्यो । त्यसो त कोभिडको महामारीले झन्डै दुई